မုဒုံမြို့ကရွှေဝါရောင်တွေ တောင်ပိုင်းကိုဆင်းပါပြီ… ယနေ့ (10.9.2020) နေ့မှာ မုဒုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ တောင်ပိုင်းရွာများသို့ အောင်နိုင်ရေးပိုစတာများစိုက်ထူခြင်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ .. ပထမဦးစွာနေ့လည်၁၁နာရီ၁၅မိနစ်ချိန်တွင်ဂုံညှင်းတန်းကျေးရွာ စျေးထိပ်၌ပါတီဥက္ကဋ္ဌနင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှအမွှေးနံ့သာရေများပက်ဖြန်၍ပါတီ အောင်မြင်ရေးကြွေးကြော်သံများဖြင့်အောင်မြင်စွာစိုက်ထူပေးခဲ့ပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်. .(UBP).ပါတီအောင်မြင်ရမည်. #UBP #ခြောက်ထောင့်ကြယ်နီ #ပိုပြီးကောင်းအောင်ပြောင်းကြမယ် #CHANGEforBETTERMENT ———————— မုဒုံၿမိဳ႕ကေရႊဝါေရာင္ေတြ…
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ၏ လူငယ့်ရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံလည်းဖြစ် ဗဟိုကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်သူ ကိုကျော်ဇင်လတ်ရဲ့ သူ့အမြင် သူ့အတွ့အကြုံနဲ့ UBP နဲ့ လက်တွဲဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ရှူနားဆင်နိုင်ကြပါပြီ ။ ……………………. ပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ UBP ၏ လူငယ့္ေရးရာေကာ္မတီတာဝန္ခံလည္းျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ဇင္လတ္ရဲ႕…
တူညီချီ ၊ မူတည်ကြည်…အဲဒါ…UBP